Elasticsearch na-akwaga na ikikere SSPL na-enweghị n'efu | Site na Linux
Elasticsearch BV kwupụtara mgbanwe ikike maka nyocha Elasticsearch, nchịkọta na ikpo okwu, yana ntanetị Kibana.
Banyere Elasticsearch 7.11 ịhapụ, oru ngo a ga-esi na Apache 2.0 kwaghari na ikikere SSPL (Server-n'akụkụ ọha ikike), nke na-agbakwụnye ihe ndị ọzọ achọrọ iji hụ na ọrụ igwe ojii na-arụ ọrụ. Maka ndị enweghị afọ ojuju na usoro nke ikikere SSPL, a na-enye ikikere azụmaahịa, ebe ụlọ akwụkwọ ndị ahịa ga-aga n'ihu na-ekesa n'okpuru akwụkwọ ikike Apache 2.0.
Ọrụ ahụ MongoDB ejiworị SSPL ma nyekwa ikike igbanwe ma kesaa koodu, mana ndị Open Source Initiative (OSI) enyochapụtabeghị ndị ọgbọ, otu ụlọ ọrụ na-enye ikikere maka inye ikike ikikere.
Ndị ọka iwu Red Hat nwere ikikere ụdị SSPL na-anaghị akwụ ụgwọ, yana Fedora Project iji gbochie ntinye ngwugwu na ngwaahịa n'okpuru ikike a na nchekwa ha.
A na-ewere nkwenye OSI dị ka ihe na-agaghị ekwe omume, dị ka enwere esemokwu na akwụkwọ ikike banyere ịkpa oke megide ụfọdụ ụdị ndị ọrụ (ndị na-eweta ọrụ igwe ojii).
Ọzọkwa, Ndị ode akwụkwọ SSPL agwụchaghị nyocha ahụ ha wepụrụ akwụkwọ arịrịọ ahụ edeturu ka ha nyochaa akwụkwọ ikike a na OSI.
A na-ahazi ikike SSPL n'ụzọ nke na, na omume, a gaghị eji ngwa ndị dị n'okpuru akwụkwọ ikike a rụọ ọrụ igwe ojii na-enweghị ịzụta ikike azụmahịa; ma ọ bụghị ya, a ga-enyerịrị koodu nke ihe niile metụtara ọrụ nke igwe ojii, gụnyere nke ndị ọzọ, nyere ya ikike n'okpuru SSPL.
Cheta na ikike SSPL gbadoro ụkwụ na ederede AGPLv3, nke mgbanwe gbanwere na ngalaba 13. A gbanwere mgbanwe ndị ahụ na mgbakwunye nke ihe achọrọ iji nye n'okpuru ikikere SSPL ọ bụghị naanị koodu nke ngwa ahụ n'onwe ya, kamakwa koodu isi mmalite nke ihe niile mejupụtara na ndokwa ahụ nke igwe ojii.
Dabere na Matthew Garrett, onye isi ngalaba nke Free Software Foundation, chọrọ ihe a mebiri ndakọrịta GPL na akwụkwọ ikikere ndị ọzọ na-egbochi imegharị nke ikikere koodu onye ọzọ.
Dị ka ihe kpatara mgbanwe nke ikike, ọchịchọ nke igbochi parasitism nke ndị na-eweta ngwaahịa pụtara ìhè nke ígwé ojii ọrụ na-emeghe iyi software. Ndị mmepe enweghị afọ ojuju n'eziokwu na ndị na-eweta igwe ojii na-eresị Elasticsearch n'ụdị ọrụ igwe ojii, mana ha anaghị esonye na ndụ nke obodo ma anaghị enyere aka na mmepe. Emepụtara ọnọdụ ebe ndị na-eweta igwe ojii na-ejikọtaghị na ọrụ ahụ na-erite uru site na ịregharị ihe ngwọta na-emeghe, na ndị mmepe n'onwe ha enweghị ihe ọ bụla.
Mgbanwe ikikere ahụ agaghị emetụta ndị ọrụ Elasticsearch nke na-eji ikpo okwu dị ka ihe ndabere, mana ọ ga-emetụta ndị na-eweta ọrụ igwe ojii na-ere ọrụ Elasticsearch site na igbe ahụ n'ụdị ọrụ igwe ojii.
Ọrụ igwe ojii ga-azụta ikikere azụmaahịa, mepee koodu akụrụngwa gị, nọrọ na ụdị nke Elasticsearch gara aga, nke nwere obere oge nkwado, ma ọ bụ na-aga n'ihu na mmepe nke ndụdụ nke Elasticsearch n'okpuru ikike nke Apache. Enwere ike ịmepụta Fork Elasticsearch dị ka mgbatị dị iche nke ọrụ Open Distro for Elasticsearch nke Amazon mepụtara.
Somefọdụ ndị nyocha na-enyocha ojiji nke Elasticsearch n'okpuru ikike ọhụrụ na ụlọ ọrụ ndị na-azụlite ọrụ ntanetị dị ka ihe egwu ọzọ maka azụmaahịa ahụ, ebe ọ bụ na ọnọdụ iji mepee mmepe metụtara ya enweghị isi. Dịka ọmụmaatụ, n'ihi okwu na-enweghị isi, enwere ike ịchọ SSPL iji nyeghachi ikikere ngwanrọ niile, gụnyere sistemụ arụmọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Elasticsearch na-akwaga na ikikere SSPL na-anaghị akwụ ụgwọ
"Elasticsearch na-agagharị na ikikere SSPL na-enweghị n'efu", site na aha anyị ga-ezighi ezi na onye ntụgharị Google na akpaghị aka maka enweghị sọftụwia efu